TopView - Fampiharana amin'ny fanadihadiana sy topografika topografika - Geofumadas
TopView - Fampiharana amin'ny fanadihadiana sy ny tsatokazo topografika
Desambra, 2017 GPS / Fitaovana, Pirinty voalohany, topografia
Isan-andro dia hitantsika fa ny zavatra ilaina dia manova ary izany noho ny antony samihafa no voatery hividy rindrambaiko hafa PC, GPS sy Total Stations, samy amin'ny fandaharana hafa, ny ilaina ny dingan'ny fianarana ho an'ny rafitra tsirairay, ary izay Manana tahirin-tsoratra tsy mifanaraka isika, ary matetika dia tsy azo atao ny mandefa ny angona avy amin'ny rafitra iray mankany amin'ny hafa.
TopView Izany dia rafitra Universal natao hiasa amin'ny programa PC, PDA, GPS, Total Station, na Brand rehetra. Noforonin'i Pié de Obra ho an'ny sekretera mpampiofana izay ahitana fomba maromaro natao hanamorana ny asa an-jatony tsy mbola nisy hatramin'izay. TopView dia manambatra ny fahalalana mihoatra ny 30 traikefa niainana ary mihoatra noho ny 500 Sector Professionals.
TopViewPc dia dikan-teny azo ampiasaina amin'ny PC, Laptop, na Tablet PC, miaraka amin'ny fanantenana fa rafitra tokana ho an'ny zava-drehetra.
-Ny software ho an'ny rafitra rehetra.
- Izany ihany koa ny Software for All Stations Total.
- Toy izany ihany koa amin'ny GPS rehetra.
- fianarana iray ho an'ny zavatra rehetra.
Olona voalamina sy mampiavaka
- Voalamina amin'ny fomba mazava sy mahatalanjona, manana sakafo mora mora.
- Ny Modules rehetra dia ahitana varavarankely izay mifandray amin'ny mpampiasa amin'ny fomba mazava sy mahaliana, mangataka ny angon-drakitra ilaina amin'ny fotoana rehetra mitarika izany amin'ny asa tsirairay.
Fandefasana sy fanondrana data
- Tena mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny programa PC izay ampiasain'ny Espaina.
- Fanoloran-tena hanavao sy hampifanaraka ny fanondranana entana vaovao sy ny endriny vaovao amin'ny programa vaovao sy vaovao.
- Fandefasana sy mivantana ny fanondranana tsy misy fivoarana.
- TopViewPc no fitaovana tsara indrindra ho an'ity asa ity na dia ny dikan'ny Ce, Pocket, ary WorkAbout ihany aza dia manana ihany koa ny Import and Export Menus
- Ny TopView dia mamela ny fametahana sy ny fijerena ny sary BMP, TIF, JPG, ary ny kalitao sy ny fanoratana azy io ho an'ny fampiasana ho avy.
- Manampy koa ny fandefasana sy ny fampisehoana ny DXF, DWG background miaraka amin'ny BMP, TIF, BMP, izay mamela ny fitantanana CAD sy ny fampiasana ny fitambaran'ny CAD rehetra.
- Mamela ny fanehoana an'ireny sary ireny amin'ny fanaraha-maso sy ny fametrahana ny Coordinates ary koa ny famandrihan'ny toetr'andro nomerika. Amin'io tranga farany io dia ilaina ny mamoaka sary izay mitarika ny mpilatsaka an-tsitrapo MDT araka ny mahazatra amin'ny an'ny Golf Course izay tsy mahomby amin'ny fitadiavana ny Green sy ny Holes ny tsy fitoviana.
- Ny TopView dia manambatra ny fitantanana ny drafitra maoderina izay ahafahana mamorona, mamafa, manaova / manala, ary manondro ny sarimihetsika ankehitriny izay raketina ireo angona nalaina tao amin'ilay saha. Mankasitraka ihany koa ny sanda avy amin'ny Import of DXF. Ny famongorana ny lay dia mamela ny fampidinana ny fizotran'ny fizotry ny drafitra sy ny fitantanana angona
- TopView dia mampiditra fomba fijery vaovao sy mahaliana, izay miaraka amin'ny fomba mahazatra dia mametraka TopView ny programa manontolo amin'ny tsena.
- Ny teboka mitoka-monina dia miditra amin'ny tanana na tsindriana amin'ny Screen.
- Ireo singa voarakitra ao amin'ny rakitra iray nosafidiana na nalaina teo aloha.
- Teboka an-tserasera.
- Coplanar Points.
- Tsipika nalaina teo amin'ny tendry na longitudinal.
- Toetoetran'ny arsenika mampifandray ny orinasa, ny haavony, ary ny làlana ambony.
- XYZ Coordinate Bases.
- Bases ao amin'ny Coordinates Geographic.
- Sections Cajeadas.
- Fizarana fizarana.
- Famolavolana Digital Terrain.
- Fikambanana CAD an'ny DXF / DWG.
- Fandraisana ireo hevi-dehibe ao amin'ny XYZ sy amin'ny Geographies.
- Mandray ny Coordinates (Tachymetric).
- Fananganana Longitudinal.
- Ny famakafakana nohadihadiana momba ny Axis.
Cajeadas Sections. Fizarana voaofanana Profile by Profile avy amin'ny programa PC izay i TopView dia mampiditra ny angon-drakitra amin'ny teboka tsirairay, arotsaka amin'ny fampitomboana Pk sy Fahafahana. Ireo sehatra ireo dia mampiditra ny Pila voafaritry ny programa Pc araka ny tontolon'ny teorika.
Sections Type. voafaritry ny latabatra ao amin'ny TopView widths sy ny sorony, Tables Midira + + Berm Hip-dalana, Superelevations table, table sy Eccentricity Medium, Vector Loha sy Loha Cunetas hantsana sy fizarana. Tsy misy ny kianja teo aloha ary ny programa dia ahafahantsika manapa-kevitra raha te-handrava na fanangonam-bola ao amin'ny Pk tsirairay isika.
- Azonao atao ny mamerina mamerina indray ny hevitra ara-teôria izay mamaritra ny fizarana misy ny Pk ary koa ny teboka naverina amin'ny halavirana sy ny haavony, ary mamela ny tsy fetezana manaraka ny iray amin'ireo havoana mifampitohy amin'ny doka voafantina.
- Avelao ny fiaraha-miombon'antoka ny Theoretical Points sy ny fomba fijery ny Vector an'ny fizarana, toy ny Slope.
- Azonao atao ny manoratra ireo teboka mahavariana momba ny Quality Control na ny Transverse.
- Mitambatra parametric sy vectorielle famaritana. Singa rehetra na parametric sy vectorielle no interpolated linearly, izay mamela ny fitantanana tehezan hantsana fiovana tsikelikely (Tali in Abanico), fiovana amoron-dalana amin'ny "V" mba longoa "U", berms izay niseho sy manjavona, berms miakatra sy midina amin'ny hantsana, sns
- Mamela ny famoronana vatsera izay mamaritra ny kodiarana, ny fiara, mitsambikina ao anaty haavon'ny hentitra ao amin'ireo singa ireo, ary ny tarehimarika rehetra, na dia toa tsy fahita firy aza.
- Ampifandraisina ny latabatra ambony amin'ny alàlan'ny axe, mamela ny karazana sokajy mitovy ho ampiharina amin'ny rantsana samihafa.
- Toy ny fizarana cajeadas no mahazo an-tsoratra ireo hevitra tao amin'ny rakitra rethought Transversal ka mandalo amin'ny iray dia afaka ho lohany, tongotra, Axe, ary alao ny Tany Transversal Real.
Digital Models (MDT)
- Stakeout tanteraka Graphic mitaratra ny triangolo izay misy antsika ary ny fitomboan'ny Cota amin'io.
- Afaka mametaka ireo peta-drindrina izay mamaritra azy ireo amin'ny endriky ny telozoro izay misy azy ary ny hadisoana avo.
- Ahafahana mamerina mamerina indray ny fototeny ho toy ny hevitra mahazatra.
- Afaka mamela sary misy sary miafina TIF / JPG / BMP / DXF / DWG ho an'ny fanaraha-maso tsara kokoa.
- Total Station: Ahafahana mampiasa ny Flat and UTM Projection System. Amin'ny tranga UTM, ny tetikasa dia manitsy ny mety ho endriky ny anamorphose ho an'ny famakiana tsirairay.
- GPS: Manome asa amin'ny daty, miaraka amin'ny rafitra eo an-toerana (SCL) eo an-toerana, na amin'ny fotoana iray ihany. Ny SCL dia mifototra amin'ny fomba hafa amin'ny fanatsarana ny XY sy ny fanitsiana ao Z noho ny fampifanarahana tsara amin'ny Real Terrain. Mampiasa SCL incorporates ny jiro (Ek ante fanaraha-maso) izay manampy hanamarina ny marina ny tahirin-kevitra (an-toerana tanana Flag niditra Diso hevitra ilay vehivavy, Geographical Flag azony tamin'ny saha diso hevitra, fanavahana ny rafitra izay Flag an-toerana "UTM na Flat ").
Fanitsiana avy amin'ny finday (A New Positioning System).
- Afaka mametraka ny GPS Base amin'ny toerana rehetra.
- Manafoana ny filàn'ny mpiasa ho amin'ny fanaraha-maso ny fahatsapana.
- Ampihenao ny teboka fototra amin'ny fahazoana ny Fahamarinana sy ny tombony amin'ny RadioModem.
- Raha lava be ny GPS dia ahafahanao manova ny Base Sensor mankany amin'ny lavaka lavitra kokoa raha tsy manamaivana ny tsipika Base.
- Ao amin'ny Asa izay efa misy GPS Base dia mamela anao hampiasa izany, na dia tsy mitovy amin'ny azy aza ny kôdiny ara-jeografika, ka afaka manavao ny GPS Base amin'ny finday ary manana sensor roa mba hanaovana ilay asa.
- TopView mamela Modules staking rehetra misokatra ny rakitra ao amin'ny mitovy izay ny hevitra tena marika saha voarakitra miaraka ny tena haavon'ny ny lalana automating ny hevitra fehezan-dalàna ao mampiseho ny anaran 'ny antontan-taratasy izay tonga ny mandrindra ny reframe , ny laharana misy ny Point, ary ny fahadisoana hita rehefa manangana izany. Ary amin'ny dingana tsirairay.
- Ity rafitra ity no fitaovana tsara indrindra ho an'ny Quality System izay ampiasaina haingana, automatisation ary fahombiazana.
Ity programa ity dia natao hiara-miasa amin'ireo Station total sy misy GPS amin'ny RTK na mode Static ho an'ny fanodinana aorian'ny fandaminana, amin'ny alàlan'ny fanovana ny tariby izay mampifandray ny PDA amin'ilay fitaovana ampiasaina, dia afaka manohy miasa amin'ny alàlan'ny fisie data ihany. . Azontsika atao ny manomboka asa amin'ny GPS ary avy eo maka ireo teboka izay tsy nety ho entina miaraka aminy, noho ny akaikin'ny tranobe na noho ny antony hafa, miaraka amin'ny Total Station amin'ny alàlan'ny fanovana ny tariby sy fisafidianana ilay fitaovana fotsiny.
Tsara homarihina ihany koa fa natao ho famenon'ireo programa ampiasaina matetika any Espana ho an'ny PC toa ny Autocad, Clip, Mdt, Istram sy Ispol, Cartomap, Protopo, sy ny hafa, afaka manafatra avy amin'izy ireo Plan sy haavon'ny famaky, lisitry ny Bases , lisitry ny Coordinates amin'ny tsatòka, lisitry ny fizarana misy valiny, ary ny base fanondranana, ny mpandrindra, ny profil amin'ny hazo fijaliana, ny profil longitudinal, sns.
Amin'ny maha-programa mivoatra any Espana, ny programa manontolo, ny boky fampianarana ary ny programa mifameno ho an'ny PC, sns… dia nosoratana tamin'ny teny Espaniôla ary namboarina tamin'ny tontolo Hartware sy ny lozisialy fahita any Espana.
Ny fampifanarahana ny programa amin'ny endriny manokana momba ny fampidirana na fanondranana rakitra dia hatrehana ao anatin'ny fotoana fohy indrindra.
Previous Post«Previous Asio sarintany Bing toy ny sarintany misy ao amin'ny Microstation
Next Post Tsy voavidim-bola ity tany itymanaraka »
Valiny iray an'ny "TopView - Fampiharana amin'ny fanadihadiana sy topografika topografika"
თემური hoy izy:
Oktobra, 2018 ao